मेलानका केन्द्रिय सदस्य चौलागाईले ग¥यो नगद १० हजार सहयोग – Google pati
२३ भाद्र २०७७ ०६:२८
हेटौंडाः मेलानका केन्द्रिय सचिवालय सदस्य तथा अखिल नेपाल प्रगतिशील जनस्वास्थकर्मी महासंघका केन्द्रिय सदस्य उत्सब चौलागाईंले अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुन नसकेका बिरामीलाई अस्पतालमै पुगेर नगद १० हजार सहयोग गरेको छ ।
अस्पतालका सर्जन डा. प्रदेश सापकोटा , रामचन्द्र सापकोटा र बिकास थापाले बिरामीलाई आबश्यक सहयोग र उपचारमा छुट दिएको छ ।
देखावटी शुभकामनाको खातले गरीब र पिछडिएका चेपाङ जातिको मन रत्तिपनी रमाएको छैन होला । जहाँ १२ दिनदेखि एपेन्डिक्सको दुखाइ सहेर पिल्सिँदै बस्नुपर्ने अवस्था छ बोली दिने सम्मनी कोही छैनन् केन्द्रिय सदस्य चौलागाईले बताए । उनीहरूको मत लिएर चुनिएका प्रतिनिधि भनाउँदा हरु उनीहरूको समस्या अवगत हुँदा र गराउँदा पनि सहयोगको आश्वासन त परै जाओस् सहानुभूतिका दोहोरो शब्द समेत व्यक्त गर्दैनन् । अनी तिनै नेता भनाउँदाहरूलाई ती गरिब र असाहाय हरूको पर्वमा मात्र शुभकामनामा भनी टोपल्ने नैतिकता कहाँ बाट आउँछ चौलागाईले भने ?
बिरामी श्यामलाल प्रजाको घर राक्सिराङ गाउँपालिका ३ मा हो । उनी उपचार खर्चको अभावमा एपेन्डिक्स जस्तो पीडादायी रोगलाई १२ दिनदेखि सहेर बसेको हुन् । प्रजा उधारो उपचार गर्दै आएको हो । आर्थिक अवस्था कमजोरका कारण उनी डिस्चार्ज हुन सकेका छैनन् ।